नेपालमा अब २ हजारमै पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने | Mechikali Daily
नेपालमा अब २ हजारमै पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: २८ भाद्र २०७७, आईतवार १६:५७
काठमाडौं, भदौ २८ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पिसीआर परीक्षण शुल्क रु दुई हजार तोेकेको छ । मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अब सबै प्रयोगशालाले पिसीआर परीक्षणको अधिकतम शुल्क रु दुई हजार तोकिएको जानकारी दिए ।
यसअघि मन्त्रालयले पिसीआर परीक्षणका लागि रु चार हजार ४ सय तोकेको थियो । त्यस भन्दाअघि पिसीआर परीक्षणका लागि मन्त्रालयले रु पाँच हजार ५०० शुल्क तोकेको थियो । नेपालमा अहिलेसम्म आठ लाख ४० हजार ५२७ जनाको पिसीआर परीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये ५४ हजार १५९ जना संक्रमित भएका छन् । दैनिक करिब १० हजारको संख्यामा पिसीआर परीक्षण भइरहेको छ ।
यसैबीच बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा २ हजार ५ सय रुपैयाँमै पिसिआर जाँच हुने भएको छ । जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अस्पतालले मूल्य समायोजन गरेको हो । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डन डा. राजेन्द्र खनालले सोमबारदेखि २५ सय रुपैयाँमा कोरोना जाँच गर्न सकिने बताए ।
‘सुरुमा ५५ सय त्यसपछि ४४ सय अब २५ सयमै पिसिआर जाँच गर्ने भएका छौं । त्यस्तै जाँचको क्षमता पनि दोब्बर दैनिक ४ सय स्वाब जाँच हुनेछन् ।’ खनालले थपे, ‘सरकारले फेरि शुल्क घटाएको भन्ने कुरा आएछ । हामीकहाँ दुईचार दिन यहीँ शुल्क रहन्छ ।’ त्यस्तै अस्पतालले शंकास्पद ‘फिभर’क्लिनिकमा आएका बिरामी र भर्ना भएका बिरामीको भने पिसिआर निःशुल्क गर्दै आएको छ । स्वाब दिएको २४ घण्टाभित्र रिपोर्ट आउनेछ ।
अस्पतालको प्रयोगशालाले अहिलेसम्म १२ हजार ९ सय पिसिआर जाँच गरिसकेको छ । पछिल्लो समय बुटवलमा कोरोना संक्रमण तीव्र भएको छ । बुटवलमा मात्रै संक्रमितको संख्या ५ सयभन्दा माथि छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किटको मूल्यमा भारी गिरावट आएसँगै नेपालमा पनि पिसिआर टेस्टको शुल्क घटाइएको कम्पनीका सञ्चालक भीम भण्डारीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा पिसिआर टेस्ट किटको मूल्य १६०० रुपैयाँ पर्छ । त्यतिबेला सरकारले पिसिआर टेस्टमा ५५ सय रुपैयाँसम्म उठाउन पाउने व्यवस्था गर्दा विधले ४ हजार रूपैयाँ मात्र लिएको थियो ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पिसिआर टेस्ट किटको मूल्य ८ सय रूपैयाँमा झरेको छ । ल्याबमा अहिले ड्यान जिन कम्पनीको पिसिआर टेस्ट किटको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । पिपिईलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको खर्चसमेत कम भएकाले आइतबारदेखि पिसिआर टेस्टको शुल्क २ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको भण्डारीले जानकारी दिए । एउटै पिसिआर टेस्टमा धेरै नाफा राख्नुभन्दा थोरै नाफा राखेर धेरै टेस्ट गर्नु संस्था र राज्यका लागि फाइदाजनक हुने भएकाले नयाँ शुल्क लागू गरिएको भण्डारीले बताए ।